* Light Of Myanmar *: မေ7သတင်းများ
တောသားနှစ်ယောက် ကနေဒါရောက်ပြီး ထန်းရည်မေ့သွားပြီ မထင်ပါနဲ့ . .
ဘီယာ၊ အရက်၊ ထန်းရည် အားလုံးကို ဘုရားကိုလှူထားတာ ကြာပါပြီ
အပြောင်းအလဲအဖြစ် သတင်းကောင်းလေးတွေ ဖတ်ချင်သူများအတွက်
၁။ ဘိုကလေး၊ လပွတ္တာ၊ ဖျာပုံ၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်းဒေသများရှိ ရဟတ်ယာဉ်မဆင်းနိုင်သော ကျေးရွာများသို့ ရဟတ်ယာဉ်များမှ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်များ ချပေးနေသည့် ရုပ်ပုံများကို မေ ၇ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီသတင်းတွင် ဖော်ပြသွားသည်။
၂။ ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရပ်ကွက်အချို့တွင် လျှပ်စစ်မီးများ ပြန်ပေးခဲ့သည်။ ရေများပြန်လာနေပြီဖြစ်သည်။ ဈေးများပြန်ဖွင့်ပြီဖြစ်သဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများမှအပ ကျန်ပစ္စည်းများ ဈေးအနည်းငယ်ပြန်ကျ သွားသည်ဟု သိရသည်။ လမ်းများ အားလုံးပြန်ပွင့်သွားပြီဖြစ်သည်။ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ကျောက်တန်း၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒလ၊ ဒေါပုံ မြို့နယ်များတွင် ၀မ်းရောဂါကာကွယ်ဆေးများ ထိုးပေးနေသည်။
၃။ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကို ပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက် Monkey Point မှ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကြား နစ်မြုတ် နေသော သဘောင်္များကို ဖယ်ရှားလျှက်ရှိသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းကိုသာ အသုံးပြု နိုင်ပြီး အိန္ဒိယစစ်သင်္ဘောများ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ချပေးခဲ့ သည်။
၄။ ရန်ကုန်နှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကြား ရေလမ်းကြောင်းမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မေ ၇ ရက်နေ့ တွင် မလိခသင်္ဘော၊ ဗညားဦးသင်္ဘောနှင့် ဗညားဒလ သင်္ဘောများသည် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်များ တင်ဆောင်ပြီး လပွတ္တာ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ဘိုကလေးမြို့များသို့ ထွက်ခွာသွားသည်။
၅။ မေ ၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်သို့ လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်-
(က) ဂျပန်နိုင်ငံ။ မိုးကာတဲ ၃၃၀၊ မီးစက် ၅၀ လုံး။
( ခ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ။ ဆေးဝါးနှင့် ရေသန့်ဆေး ၂ တန်၊ အစားအစာနှင့် အ၀တ်အစား ၇ တန်။
( ဂ) လာအို။ အစားအစာ ၃ တန်နှင့် ဒေါ်လာ နှစ်သောင်း။
(ဃ) ထိုင်း။ ဆန် ၁.၂ တန်နှင့် ခေါက်ဆွဲခြောက် ၂ တန်။
( င) တရုတ်။ အသားခြောက် ၀ . ၆ တန်၊ ရေသန့် ၁. ၄ တန်၊ သွပ်၊ သံ ၃ တန်၊ ဖယောင်းတိုင် ၁. ၁ တန်။
( စ) အိန္ဒိယ။ ဆေးပစ္စည်း လေယာဉ် ၂ စီးစာ။
(ဆ) စင်္ကာပူ။ ဆေးပစ္စည်း ၃၆ ထုတ်။
၆။ မြန်မာ့အသံမှ အဆိုပါ ပစ္စည်းများကို ရဟတ်ယာဉ်၊ ကားများပေါ်သို့ ချက်ခြင်းပြောင်းတင်ပြီး လေဘေးဒဏ်ခံ ဒေသများထွက်ခွာသွားသည့်ပုံများ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှ တိုက်ရိုက်ချပေးနေသည့် ပုံများ ပြသသွားသည်။
၇။ UN စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်မှလည်း ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆန်များဝေနေပြီး ကယ်ဆယ် ရေးလေယာဉ် လေးစီး မေ ၈ တွင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
၇။ အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများနှင့် အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီများက ၎င်းတို့ ၀န်ထမ်းများကို ဗီဇာ ထုတ်ပေးပြီး ၀င်ခွင့်ပြုရန်နှင့် ထိုဝန်ထမ်းများရောက်ရှိပြီးမှသာ အကူအညီများပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလျှက်ရှိသည်။
၈။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက အမည်မဖော်ပြလိုသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ သတင်းအရ သေဆုံးသည့် အရေအတွက် တစ်သိန်း အထိရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အမေရိကန် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ များကို တိုင်းပြည်အတွင်း အမြန်ဝင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရိုက်စ်ကလည်း အလားတူသဘောပြောဆိုခဲ့သည်။
၉။ NLD ကလည်း နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များကို အကန့်အသတ်မရှိ ၀င်ခွင့်ပြုရန် နှင့် NLD အနေဖြင့် ထိုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် သွားသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် NLD က ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ပြီး အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများနှင့် INGO များအနေဖြင့် NLD ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီမှ တဆင့်သာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုမည် ဆိုသည့် သတင်းများ ပေါ်ထွက်နေသည်။
၁၀။ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လှူဒါန်းငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘဏ်သို့ လွှဲပြောင်းရာတွင် အမေရိကန် အစိုးရ၏ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း သတင်းများပေါ်ထွက်နေသည်။
Posted by * In Search of Truth * at 9:59 PM
Sadhu, sadhu, sadhu for offering all sorts of alcohol to the Master of all gods and men.